Iinzuzo zokufaka isicelo kwiKholeji yeSigqibo seNkqubela nokuSebenza kwangaphambili
Ngaba Uya Kufaka Ikholeji Ekuqaleni?
Funda i-Pros and Cons to Apply to the College of Action Early or Decision Decision
Iikholeji ezininzi ezikhethiweyo kwilizwe zinomhla wokugqibela wokwamkelwa phakathi kwexesha likaDisemba naphakathi kweFebhuwari. Abaninzi banomhla wokugqibela we-Early Action okanye abafaki-zicelo bokuqala beNqumo abawa ngokukhawuleza ekuqaleni kukaNovemba. Eli nqaku liphonononga ezinye zeenzuzo kwakunye neengxaki ezingathandekiyo zokufaka iikholeji ngaphantsi kweenkqubo zezicelo zangaphambili.
Yiyiphi Intsebenzo Yokuqala kunye neNqumo Yokuqala?
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iinkqubo zokungeniswa kweNkqubo yokuQala kunye neNkqubo yokuQala kweNkqubo zokuQala kweNkundla zibahluko obalulekileyo
Isenzo sokuqala: Enye yezinto ezintle kakhulu, i-Early Action ivumela abafundi ukuba bafake izicelo kwiikholeji ezininzi njengoko befuna, kwaye ababophekile ukuba baye apho bevunyelwe. Abafundi banokuda ukuya ngoMeyi 1 ukwenza isigqibo malunga nokuya. Funda ngakumbi kweli nqaku malunga nokuSebenza kwangaphambili .
Ukhetho oluQhathaniswayo lokuqala: Njengezenzo zokuqala, awuyi kubakho ukuba ube khona xa kufuneka ungeniswe. Kwakhona, njenge-Early Action, abafaki-zicelo baye kube ngoMeyi wokuqala ukwenza isigqibo. Ngokungafani neNkqubo yokuSebenza kwangaphambili, unokufaka isicelo kwikholeji enye kuphela kwinkqubo yesicelo sokuqala (kodwa unokufaka izicelo kwezinye izikolo ngokungenazo iinkqubo zokungeniswa rhoqo). Lo mqathango uthintela ikholeji engcono kumlinganiselo wesicelo somenzi wesicelo kunokuba kunokwenzeka ngeNkqubo yoLwangaphambili. Funda ngakumbi kweli nqaku malunga nokuSebenza okuKhethwe kwangaphambili .
Isigqibo sokuQala: Iyona nto inqandekayo kwinkqubo yokwamkelwa kwangaphambili, isigqibo sokuqala sibophezela kwaye sinqande. Unokufaka isicelo kwikholeji enye nje ngeprogram yokumkelwa kwangaphambili, kwaye ukuba uyangeniswa, kufuneka uhoxise nayiphi na enye iifowuni zeekholeji kwaye uya khona. Isigqibo sokuqala sisigqibo esilungileyo kubafundi abangaqinisekanga ukuba bafuna ukuya khona. Funda kabanzi kweli nqaku malunga neSigqibo Sokuqala .
Ngaba Ukusetyenziswa Kwexesha Lokuqala Kuphucula Amathuba Akho?
Iikholeji ziya kukuxelela ukuba zisebenzisa imigangatho efanayo, ukuba ayinayo imigangatho ephakamileyo, xa ivuma abafundi ngokusetyenziswa kweNkqubo yokuQala kweNkqubo kunye neNkqubo yokuQala kweNkqubo. Kwinqanaba elinye, mhlawumbi oku kuyinyaniso. Abanamandla kunabo bonke abafundi abanomdla bavame ukusebenzisa izicelo zakuqala.
Abafundi abangenzi isinqununu baya kufudukela kwiqonga lokungeniswa rhoqo, kwaye isigqibo sokwamkelwa siya kufakwa. Abafundi ngokucacileyo abangafanelekanga ukuba bangeniswe baya kunqatshwa kunokuchazwa.
Nangona ziphi iikholeji zithetha, inani lamanani lokungeniswa libonisa ukuba amathuba okuvunyelwa ukuba avunyelwe aphezulu kakhulu xa usebenzisa isicelo seNkqubo yoLwangaphambili okanye iNkqubo yokuQala kweNkundla. Le tafile ye-2014 Ivy League idatha icacisa le ngongoma:
I-Ivy League Ekuqaleni kwaye rhoqo Yamukela amaxabiso
College Imali yo kuQala ko kuqala I-Admit Rate Uhlobo lo kwamkelwa
Ntsundu 18.9% 8.6% I sigqibo so kuqala
Columbia 19.7% 6.9% I sigqibo so kuqala
Cornell 27.8% 14% I sigqibo so kuqala
Dartmouth 28% 11.5% I sigqibo so kuqala
IHarvard 21.1% 5.9% Ukhetho oluKhethekileyo lwangaphambili
Princeton 18.5% 7.3% Ukhetho oluKhethekileyo lwangaphambili
U Penn 25.2% 9.9% I sigqibo so kuqala
Yale 15.5% 6.3% Ukhetho oluKhethekileyo lwangaphambili
Gcina ukhumbule ukuba izinga lokuvuma elipheleleyo apha ngasentla liquka ukuvuma abafundi ekuqaleni. Oku kuthetha ukuba izinga lokuvuma kwisitya sofake izicelo rhoqo liphantsi kunamanani omgangatho wokuvuma.
Iikholeji ezinjengezicelo zokuqala. Nasi isizathu:
Kukho isizathu esenza ukuba iikholeji zizalise iiklasi zazo kunye nabafundi bezicelo zakuqala.
Abafaki-sicelo bokuqala ba khuthazwa.
Abafaki-sicelo bokuqala kufuneka baququzelelwe ukwenza izicelo zabo zilungele ekuqaleni kukaNovemba (okanye ngaphambili).
Abafaki-sicelo bokuqala babonisa ukuzimisela esikolweni. Ukusetyenziswa kwangaphambili kuyimilinganiselo ebalulekileyo yomdla obonakaliswe ngumfundi.
Ikholeji inokukhenkca-kwiklasi ezayo ezayo kwaye ibe nokungaqiniseki kangako entwasahlobo.
Iinzuzo zokufaka isicelo kwiKholeji yokuSebenza kwangaphambili okanye isigqibo sokuqala:
Ukuphucula amathuba akho okuvunyelwa.
Bonisa umdla wakho kwikholeji.
Fumana isinqumo sakho sokwamkelwa ngaphambi kweKrisimesi, kwaye ukuba iindaba ezilungileyo zizisindise entwasahlobo.
Ngaphantsi kweSicelo sokuQala:
NgeSigqibo sokuqala, kufuneka uhambe ukuba uvumelekile.
NgeSigqibo Sokuqala, awuyi kukwazi ukuthelekisa amaphakheji encediso lwezemali, kwaye uya kuba nefuthe elincinci lokuba uthethathe uncedo lwakho.
Kufuneka ukuba isicelo sakho siphose iinyanga ezimbini ngaphambi kwezicelo eziqhelekileyo.
Nawuphi na uvavanyo lwe-SAT okanye UMTHETHO emva ko-Oktobha mhlawumbi liza kukhawuleza ukuba liqwalaselwe xa lisebenzisa okokuqala.
I-Cairn University Admissions
I-eNew University yaseMexico yaseMelika
I-Admissions yaseYunivesithi yaseTarleton
Iinkcukacha ezibalulekileyo malunga nePoland yasePennsylvania
6 I-Top Atticus Finch Quotes ukusuka Ekubulaleni i-Mockingbird nguHarper Lee